Ugu yaraan labo ruux oo shacab ah ayaa ku dhaawacmay rabshado xoogan oo maanta hareeyey magaalada Marko ee xarunta gobolka Sh/hoose ka dib Markii shacab careysan ay dhigeen dibed baxyo ka dhan ah ciidanka AMISOM ee magaaladaas jooga.
Shacabka dhigayey dibed baxyada rabshadaha watay ayaa ka cabanayey howlgal ciidamada AMISOM shalay ka sameeyeen xaafado ka mid ah magaalada Marko ka dib markii lala eegtay qarax miino.
Qaar ka mid ah odayaasha magaalada Marko ayaa sheegay in intii uu howlgalkaas socday ay ciidamada AMISOM xoog ku galeen guryo ay degan yihiin shacab masaakiin ah ayna ka geysteen falal iskugu jira jirdil iyo dhac, ayna sidoo kale rasaas ku dhaawaceen nin dhalinyaro ah oo ay qabteen.
Dibed baxeyaal careysan ayaa wadooyinka magaalada Marka gooyey muddo saacado ah iyagoo ku gubay taayerada baabuurta, socodka dadka iyo ganacsiga ayaa maanta waxay ahaayeen kuwo gaabis ah.
Ciidamada AMISOM ayaa rasaas ku kala eryey banaanbaxayaal careysan oo isugu soo baxay agagaarka xeryaha ay ku leeyihiin gudaha iyo hareeraha magaalada Marko, kuwaasoo qeylinayey isla markaana tuurayey dhagxaan iyo waxyaabo kale, hase ahaatee lama sheegin khasaare ay geysatay rasaastaas.
Xaalada magaalada Marka ee gobolka Sh/hoose ayaa degan galabta ka dib rabshadihii saaka oo ahaa kuwii ugu xumaa ee halkaas ka dhaca tan iyo markii Al-shabaab lagala wareegay, mana jiro hadal ka soo baxay saraakiisha AMISOM oo ku saabsan rabshadahan.